Maalin: Janaayo 11, 2019
Weftiga Kardemir, oo ka kooban Kamil Güleç, Gudoomiyaha Gudida Sare ee Karabük Iron iyo steel Enterprises (KARDEMİR), Farmer Faruk Öz, gudoomiye kuxigeenka gudiga, iyo Osman Kahveci, xubin ka ah gudiga, gaadiidka iyo kaabayaasha [More ...]
Miyuu Greve Mi Start ku Bilowday Iskuulka?
Basaska ESHOT ayaa shaqo joojin ka bilaabay İzmir. In kasta oo aan wali wax war rasmi ah laga soo saarin weli, haddana waxa la sheegayaa in shaqaaluhu shaqada uga tageen sababtuna tahay bilayska oo ku wajahan shaqaalaha ka hor shaqeeya degmada saacadihii la soo dhaafay. Izmir ESHOT [More ...]
Mamnuucidda Grevin ma aysan soo saarin IZBAN
Saldhigyada IZBAN kama shaqeeyaan muraayadda la iftiimiyay ee muujinaya waqtiga. Ma jiro qof xarunta jooga oo garanaya muddada la sugayo. Sida uu sheegayo Turan KARA oo ka socda Evrensel; Sıcaklık Magaalada beeraha waxaa laga aasaasay agagaaraha wershadaha culus ee Izmir, heerkulku waa [More ...]
IŞBAN Shaqaalaha Weerarka Shaqada
"Shaqo joojinta ayaa dib loo dhigay laakiin IZBAN kama dhicin ajendaha Izmir. Sababo la xiriira carqaladeynta duulimaadyada awgeed, rakaabku waxay isku dayeen inay weeraraan iyagoo bartilmaameedsanaya shaqaalaha. ”Saxiixa Madaxweyne Tayyip Erdoğan, shaqo joojinta 'ZBBAN' dib ayaa loo dhigay. Sikastaba, doodii ka dhacday Izmir ma dhamaan. in izban [More ...]
Burburinta Rakaabka Rakaabka ee Gaadiidka Dadweynaha
Codsiyada isgoysyada ee caqliga leh, howlo dheeri ah iyo dhimis isdaba joog ah oo ay sameeyeen Dowlada Hoose ee Bursa ee sanadkii la soo dhaafay ayaa xiiso u qabay gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Maareynta Khatarta ee YHT
Khadka Ankara YHT wuxuu bilaabay dhismaha masiibada ka dib dhammaystirka calaamadaha, xarunta kantaroolka ayaa u dhaqaaqi doonta ajendaha. Eroglu oo ka socda BTS, "Haddii gaadiidku ku dhici karo carqalad daran," ayaa ka digay. 13 ee Ankara [More ...]
Fatal Shil Tareen ee Turkey badan dunida celcelis 3 Floor More
Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee Qaramada Midoobay (BTS), Nidaamka Dib-u-Dhiska Ankara TCDD iyo Warbixinta Musiibada Tareenka ee Xawaaraha sare ee Xarunta Waddooyinka Marshall ka dib shilkii tareenka xawaaraha-sareeyay ee ka dhacay Ankara halkaas oo lagu dilay 9 oo ay ku dhinteen dad 86 ah. [More ...]
Bariga Express wuxuu u guurayaa in uu abaabulo Awooda Ganacsi ee Anatoliya
In Turkey oo doonaya in ay ka dhabeeyaan riyooyinkooda iyo taageero siiya xawaaladaha ganacsatada kuwaas oo doonaya in ay kor u furi dunida, 3. 35 kun ee muddada on aagga codsiga ka qaybgalayaasha Xamdi Ulukaya Initiative ee labada muddo ugu horeysay, ganacsiga ugu Turkey ee qibrada leh [More ...]
Dib-u-dhajin Tababar Tareen
Haweeney Jarmal ah oo ku nool Munich, dib u dhac kasta oo ku yimaada tareenka ay gashato midabbada jajaban ayaa la duubay. Inbadan oo innaga mid ah kuma lihin shisheeyaha soo daahida gaadiid qaadista ee ka imanaya A ilaa B. Magaalada Munich, Jarmalka [More ...]
Kulanka Xiriirka Sanadka ee DHMI 2019 ayaa bilowday
Shirka isuduwidda sanadka ee DHMİ 2019 wuxuu ka billowday Xarunta Xarunta Golaha Dhexe ee DHMİ, Maddaarka Esenboğa. Kulanku wuxuu ku bilaabmay khudbadda furitaanka Funda Ocak, Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha iyo Maareeyaha Guud. [More ...]
Kolin dhismaha ka baxa IGA
Kolin Construction waxay go’aansatay inay saamiheeda ku wareejiso IGA, oo ka shaqeysa garoonka diyaaradaha saddexaad ee Istanbul, oo ay sidoo kale iskaashi la leedahay ganacsiyada kaladuwan. İGA, oo hirgelisay mashruuca garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul oo ay la socoto qaabka loo yaqaan 'Buy-Operation-Transfer' oo fulisay howlihiisii ​​sanadka 25 [More ...]
Ali Ekber Demirbilek oo loo magacaabay Adeegga Dayactirka Tareenka
TCDD Izmir 3. Maareeyaha Gobolka Selim Koçbay, Ali Ekber Demirbilek'e oo loo magacaabay Agaasimaha Adeegyada Dayactirka Wadada ayaa booqday. TCDD Izmir 3. Maareeyaha Gobolka 3. Maareeyaha Gobolka Selim Koçbay, Gobol [More ...]
Kanal Istanbul wuxuu noqon karaa kan ugu horreeya tamarta ee adduunka
Tirinta codbixinta ayaa sii socota mashruuca Kanal İstanbul, oo loo arko mid ka mid ah maal gashigii ugu weynaa taariikhda Jamhuuriyadda. Sida laga soo xigtay khabiirada tamarta, kanaalka wuxuu noqon karaa kanaalka ugu horreeya ee Dunida. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Hawlgalkii Bilayska Burulaş Moved Vodafone Bulut
nidaamka tigidhada shirkad gaadiid oo ugu weyn Bursa ee u dhaqaaqay kaabayaasha Vodafone Cloud Bursa maamushaa shabakadda gaadiidka dadwaynaha oo dhan ee bartamaha magaalada, Burulaş ee tigidhada hawlgallada, siday aqoonta on Vodafone technology Group ee Turkey [More ...]